ब्रेन ट्युमरका सुरुवाती ७ लक्षण – Health Post Nepal
२०७६ जेठ ५ गते १०:३०
मस्तिष्कमा ट्युमर हुँदा शरीरमा यस्ता बदलाव देखिन्छन् :
– शरीरलाई विभिन्न तरिकाले प्रभावित गर्छ ।
– खोपडीभित्र विभिन्न समस्याले दबाब पैदा हुन्छ ।
– सोच्न, सम्झिन, सुन्न तथा देख्नमा समस्या हुन्छ ।
जब मस्तिष्कका कोषहरूमा असामान्य वृद्धि हुन्छ, त्यसलाई ब्रेन ट्युमर भनिन्छ । ब्रेन ट्युमर विभिन्न प्रकारका हुन्छन् र दिमागको कुनै पनि भागमा हुन सक्छन् । यीमध्ये केही ब्रेन ट्युमर क्यान्सर हुन्छन् त केही हुँदैनन् ।
सामान्यतया मानिस मान्छन् कि, ब्रेन ट्युमरले दिमागलाई मात्र प्रभावित गर्छ, तर यो वास्तविकता होइन । वास्तवमा दिमागले नै पूरै शरीरको कार्यप्रणाली सञ्चालन गर्छ । तसर्थ, दिमागमा गडबडी हुँदा शरीरले पनि स्वस्थ तरिकाले काम गर्न सक्दैन । ब्रेन ट्युमरका कारण शरीरमा हानिकारण असर भएनछ भने पनि शरीर त्यसको प्रभावबाट अछुतो रहन सक्दैन । जब दिमागमा ट्युमर हुन्छ, त्यसका कारण शरीरमा पनि अनेकतरहका बदलाव देखिएको पाइन्छ । जस्तै,
१. शरीरका विभिन्न भागमा आघात
विशेषज्ञका अनुसार दिमागमा ट्युमर र शरीरमा त्यसको प्रभावबीच आपसमा गहिरो सम्बन्ध छ । जब व्यक्तिमा ब्रेन ट्युमर हुन्छ, उसलाई अक्सर शरीरका विभिन्न भागमा आघात पुग्न थाल्छ । बास्तवमा ट्युमरका कारण मस्तिष्कमा जलन हुन्छ, जसले मस्तिष्कका नसा तथा तन्त्रिकालाई अनियन्त्रित बनाउँछ र व्यक्तिभित्र असामान्य हलचल पैदा हुन्छ । ट्युमरजस्तै आघातका पनि विभिन्न रूप देखिन्छन् । जस्तै, पूरै शरीर वा शरीरको कुनै भागमा झड्का वा ऐठन, बेहोसी, यी सबै आघातकै रूप हुन् ।
२. शरीर लठ्ठिनु वा निष्क्रिय हुनु
ब्रेन ट्युमरका कारण व्यक्तिको अनुहार वा शरीरका विभिन्न भाग अधिकतर लठ्ठिने वा चेतनाशून्य हुने हुन्छन् । विशेषगरी, ट्युमर ब्रेन स्टेममा विकसित हुन्छ । यो त्यो स्थान हो, जहाँ मस्तिष्क मेरुदण्डको हड्डीसित जोडिन्छ र यहाँको ट्युमरले पूरै शरीर लठ्ठिएको वा क्रियाहीन भएको अनुभव गराउँछ ।
यदि सेरिबेलममा ट््युमर भएमा व्यक्तिमा समन्वयमा समस्या हुन्छ । सेरिबेलममा ट्युमर हुँदा व्यक्ति सामान्यतया धरमराउन थाल्छ । यसका कारण व्यक्तिमा हिँडहुल गर्नमा समस्यादेखि लिएर नियमित काम गर्न, यहाँसम्म कि, खाना खानसमेत समस्या हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त यदि ट्युमर मस्तिष्कको बेसल गेन्ग्लियामा भएमा यसबाट शरीरको पोजिसन नै असामान्य हुन्छ ।
४. दृष्टिसम्बन्धी समस्या
यदि मस्तिष्कको पछाडिको भाग वा पिट्युटरी ग्रन्थिको आसपास ट्युमर भएमा यसको सीधा असर व्यक्तिको आँखामा पर्न जान्छ । यसका कारण रोगीले धमिलो देख्ने तथा दुईवटा आकृति देख्नेजस्ता समस्या सुरु हुन्छ ।
५. सुन्नमा समस्या
जुन व्यक्तिमा ब्रेन ट्युमर कपालतन्त्रिकाको नजिक हुन्छ, उसको सुन्ने क्षमता लगभग नासिन्छ । यसका अलावा रोगीमा सन्तुलन कायम गर्नमा समस्या हुन्छ भने अनुहारका मांसपेशीहरू कमजोर हुन्छन् र खाना निल्नमा समेत समस्या हुन्छ ।
६. सम्झिनमा समस्या
ब्रेन ट्युमरले रोगीको सोच्ने–सम्झिने क्षमतामा धेरै हदसम्म प्रभावित बनाउँछ । मस्तिष्कको केही भागमा ट्युमर हुँदा रोगीलाई बोल्नमा मात्र समस्या नभएर शब्दहरूलाई सम्झिन र बुझ्नमा समेत कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि मस्तिष्कको अगाडिको हिस्सामा ट्युमर भएमा त्यसले व्यक्तिको सोच र व्यक्तित्वलाई विपरीत तरिकाले प्रभावित बनाउँछ ।
७. टाउकोको तीव्र दुखाइ
ट्युमर मस्तिष्कको जुनकुनै हिस्सामा भए पनि यसले खोपडीभित्र दबाब उत्पन्न गर्छ । यसका कारण व्यक्ति कडा टाउकोदुखाइदेखि लिएर जिउ चिलाउने, उल्टी हुनेजस्ता समस्या हुन्छन् । यति मात्र होइन, यसका कारण व्यक्तिमा सधैँजसो आलस्य पैदा हुने वा सुत्नमा समस्या हुनेजस्ता कठिनाइ आइपर्छन् । यसका अतिरिक्त यो दबाबका कारण व्यक्ति ‘कोमा’मा पनि जान सक्छ ।